Fampiatoana ny fitondrana vohoka amin'ny daty aty aoriana - famantarana ara-tsosialy, fitsaboana, fitsaboana, fanesorana amin'ny fanalan-jaza
Fahatontosana ny fitondrana vohoka - fitsaboana ara-tsosialy sy ara-pahasalamana ary ny fomba fanalan-jaza rehetra
Ny fampiatoana ny fitondrana vohoka amin'ny farany dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny tranga manokana. Ny fanirian'ny vehivavy iray amin'ny fotoana iray dia tsy midika ho fampidirana fitsaboana. Ny dokotera dia matahotra ny mety ho voka-dratsy ateraky ny fanalan-jaza farany, ny ankamaroany dia ny tsy fahampian-tsakafo.
Misy fanalan-jaza atao ve any aoriana?
Ny fampiatoana ny fitondrana amin'ny fangatahan'ny vehivavy dia azo atao amin'ny dingana voalohany amin'ny fivoaran'ny foetus. Ny vanim-potoana farany amin'ny famaranana ny fitondrana vohoka natomboka tamin'ny reny dia 12 herinandro. Ny fanalan-jaza aorian 'io fotoana io dia antsoina hoe tara ka tsy atao afa-tsy amin' ny tranga manokana. Ny fisafidianana ny fomba fampiasana ny fizotry ny fitondrana vohoka dia atao amin'ny vanim-potoana ankehitriny, ny taonan'ny vehivavy bevohoka ary ny toetry ny fahasalamany. Noho izany, taorian'ny herinandro 20 nateraky ny lahy sy ny vavy, ny dokotera dia tsy mampiasa teknika fanandevozana malaza, fa miteraka zaza teraka.
Fampahalalana momba ny fanalan-jaza
Ny fanapahan-kevitra fa ilaina ny fanalàn-jaza amin'ny daty aty aoriana dia raisin'ny komity ara-pahasalamana. Ny dokotera tonga mpikaroka (mpitsabo aretin-tsaina, manam-pahaizana manokana amin'ny sehatra izay miteraka ny fanalan-jaza (sosialy, solontenan'ny fanjakana)) dia mandinika ny vokatry ny fitsaboana ara-pahasalamana, ny fepetra ara-tsosialy izay misy ny vehivavy bevohoka. Ny fanapahan-kevitra farany momba ny ilàna ny manapaka ny taolam-pananahana aorian'ny 12 herinandro dia azo raisina amin'ny fototry ny:
Fanondroana ara-pitsaboana momba ny fanalan-jaza
Ity karazana endriky ny fandroahana ny fitondrana vohoka amin'ny daty aty aoriana dia raisina an-kolaka voalohany. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, mifandray amin'ny fisian'ny vehivavy bevohoka misy aretina izay afaka misakana azy tsy haka sy hiteraka ilay zazakely. Ankoatra izany, ny fanalan-jaza amin'ny faramparan'ny taona dia azo aseho amin'ny alalan'ny famantarana ny tsy fahampian-tsakafo sy ny areti-pandrosoana izay hampisy fahasembanana na fahafatesana ny zaza aorian'ny fiterahana. Anatin'ireo mari-pamantarana ara-pahasalamana momba ny fanalan-jaza aorian'ny herinandro 12 dia:
aretina ara-tsaina sy ara-batana amin'ny vehivavy bevohoka;
Ny fisian'ny porofo momba ny toetra kristiana ao amin'ny foetus, tsy mifanaraka amin'ny fiainana;
frozen pregnancy ;
aretina mafy amin'ny bevohoka (hematite, virosy virosy, tuberkuleza);
ny mety hisian'ny fahafatesan'ny vehivavy amin'ny fivoarana bebe kokoa sy ny fampandrosoana ny fitondrana vohoka.
Fanondroana ara-tsosialy momba ny fanalan-jaza
Ny antony ara-sosialy momba ny fanalan-jaza any aoriana dia vokatry ny fisehoan-javatra mety hanaparitaka ny toe-piainan'ny zazakely bevohoka na ho avy. Matetika ny dokotera no manaiky ireo fiantraikany ara-tsosialy mivantana mivantana mandritra ny fitondrana vohoka:
fahafatesana ny vady;
ny fisamborana ny iray amin'ireo ray aman-drenin'ny zazakely.
Ankoatr'izany dia misy ny fiantraikany ara-tsosialy maromaro izay azo jerena ihany koa rehefa manapa-kevitra momba ny fanalan-jaza, saingy ny fahazoana azy dia tsy midika firy amin'ny fanelingelenana ny fitondrana:
tsy fisian'ny trano;
ny fisiana ao amin'ny fianakaviana misy ankizy mihoatra ny 3;
Ny taonan'ny reny amin'ny hoavy dia latsaky ny 18 taona.
Ahoana no ahafahan'ny fanalan-jaza atao any aoriana?
Ireo fomba fanao amin'ny fanalan-jaza amin'ny faran'ny taonany dia tsy misy fahasamihafana amin'ny fampiasan'ny mpitsabo amin'ny fiandohan'ny fitondrana. Na izany aza, ny fampiatoana ny fitondrana vohoka amin'ny fiterahana dia tsy vita. Ny safidin'ny fomba amam-panao dia alehan'ny komity ara-pitsaboana araky ny vokatry ny fandinihana, ka manamarina ny vanim-potoan'ny fitondrana vohoka sy ny endriky ny fianarany. Ny teknika tsirairay dia manana ny toetrany manokana, teknika iray. Ao anatin'ireo fomba fampiasana ny fampihenana ny fitondrana vohoka, aorian'ny herinandro 12 dia mampiasa:
Fizarana sesarena kely.
Ny fomba fampidirana ny ranon-tsakafo intraamnial
Ny fanalan-jaza amin'ny fitondrana vohoka amin'ny fampiasana vahaolana hypertonic dia fomba iombonana. Ny fomba fiasan'ity fomba fitsaboana ny taolam-paty ity dia mifandraika amin'ny fiovan'ny volon'ny amniotic, ny tsindry hazokely. Noho ny fiovana toy izany, dia misy ny fanorenana ny rafitra musculaire amin'ny tranonjaza miaraka amin'ny fihenam-bidy manaraka.
Ny fampitomboana ny tonon'ilay uterus amin'ity tranga ity, ny dokotera dia mifanerasera sy ny mety ho vokatra mampidi-doza amin'ny akora izay mipoitra rehefa maty ny foetus (vokatry ny voka-dratsin'ny vahaolana hypertonic). Ny fihetsiketseham-po mahery vaikan'ny myometrioma dia mitarika amin'ny fandroahana ny foetus ho any ivelany, vokatry ny fanamoriana tanteraka ny vohoka. Amin'ny alalan'ny rafitra, ny fomba fanao dia mitovy amin'ny famaranana ny fiterahana amin'ny zava-mahadomelina, izay tsy ampiasaina amin'ny manaraka. Aorian'ny fitsaboana, ny dokotera dia mandinika amim-pitandremana ny tonon-kira uterine mba hanilihana ny fisian'ny fetal sisa tavela.
Fanafahana sy famindrana
Ny fanalan-jaza an-jaza noho ny antony ara-pitsaboana dia matetika vokatry ny fampivoarana sy ny famindrana toerana. Ny fotoana tsara indrindra ahafahana manala zaza dia 15-18 herinandro. Voalohany, ny dokotera dia mampivelatra ny lakandrano mihetsiketsika, mampiasa fitaovana saro-pady amin'ny fampivoarana tsikelikely ny dilatera.
Taorian'ny fahazoana miditra amin'ny lava-tranon'ny uterine, ny dokotera dia manasitrana fetal ary manaparitaka ny foibem-bolo. Amin'ny faran'ity sehatra ity dia manomboka miala amin'ny fivoahana izy ireo - miala amin'ny foitra mitohy amin'ny fanampiana amin'ny fanangonam-bona. Ny fialana amin'ny alàlan'ny fanalefahana dia alaina ho fomba malefaka fanalan-jaza amin'ny fotoana manaraka ary omen'ny WHO ho fomba fanao mahazatra amin'ny fanalan-jaza.
Fizarana sesarena kely
Ity karazana fanalan-jaza an- tsoratra ity dia tsy misy fahasamihafana amin'ny seza misy mahazatra. Ny fahafahana miditra amin'ny foetus dia avy amin'ny lamosina eo amin'ny rindrina ao ambany rihitra, ka aorian'izay ny voankazo dia entina. Ny fandidiana dia atao amin'ny fanenjehana ankapobeny. Tsy dia ampiasaina io fomba fanao io, raha oharina amin'ny fanoherana ny fomba fiasa voalaza etsy ambony. Mandritra ny fandidiana dia misy ny fihenan-danja goavana amin'ny fandosirana tsy voafehy, ka ny fanapahan-kevitra horaisina dia atao rehefa misy fandrahonana ny fiainan'ny vehivavy.
Fomba famokarana artifisialy
Raha misy ilàna ny fanalan-jaza amin'ny daty manaraka, aorian'ny 20 herinandro , ny dokotera dia manova taktika amin'ny famindrana amin'ny artifisialy. Ny foetus amin'ity tranga ity dia tsy nesorina tao amin'ny lavaka fananganana tranonjaza, fa ny fomba fanatanterahana dia mahatonga ny fandroahana tsy miankina amin'ny any ivelany. Miresaka momba ny fanalan-jaza amin'ny faramparan'ny fiainany ny dokotera, matetika ny mpitsabo dia mampiasa ny teny hoe "fanentanana ny fahatarana aloha".
Amin'ny faramparan'ny fe-potoana, ny fanalàn-jaza dia tsy lazaina hoe fanalàn-jaza raha jerena ny psykolojia: ny foetus amin'izao fotoana izao dia azo antsoina hoe zaza, ary ny reny hoavy dia efa tia ny zaza. Ny firafitra ao amin'ny hormones dia manome fahatsapana reny. Ny fanerena zaza teraka dia manomboka amin'ny fanentanana - mampiditra ny prostaglandins ao amin'ny vatana izy ireo, izay mampitombo ny fihenan'ny muteria amin'ny uterine ary mahatonga ny fifandirana. Vokatr'izany dia manomboka ny asan'ny foko.
Fitsaboana taorian'ny fandroahana ny fitondrana vohoka nandritra ny vanim-potoana taty aoriana
Ny fanalan-jaza dia singa iray foana ho an'ny vatana, manamaivana ny fahantrana, noho izany dia zava-dehibe ny fanaraha-maso ny toetry ny fahasalaman'ny vehivavy. Ny rafitra fananahana dia mamorona tontolo tsara ho an'ny fivoaran'ny aretina sy ny aretin-tsaina. Amin'ny maha-mari-pamantarana ny fepetra momba ny fananganana fananganana fanangonam-bokatra, dia entina mivoaka ny fanalan-jaza taorian'ny fanalan-jaza. Amin'ny ankapobeny dia miseho izy ireo amin'ny andro faha-2-3 aorian'ny fikarakarana, mety misy rà bitika kely, fa aza reraka. Ny fiovan'ireto mari-pamantarana ireto dia mety manondro aretina iray. Ny jiro mavomavo amin'ny fofona mena dia tokony ho antony hifandraisana amin'ny dokotera.
Ny fitsaboana mavo izay mitranga aorian'ny fiterahana dia mety hijanona hatramin'ny 10 andro. Amin'ny tranga sasany dia mety hitan'ny vehivavy ny fisehoan'ny tosi-drà (misy ny fifindrana eo ambanin'ny fitomboan'ny hafanan'ny vatany). Ny habetsaky ny sekrana toy izany dia mora, ary izy ireo dia tsy miaraka amin'ny fahatsapana mampihetsi-po ao amin'ny kibon'ny ambany na ao amin'ny faritra misy vaginal. Ny fanovana ny sekretera ho an'ny mainty matevina dia mety manondro polyps amin'ny tranonjaza.
Famerenana aorian'ny fanalàn-jaza any aoriana
Ny faharetan'ny vanim-potoana fanarenana dia voafaritry ny fomba famaranana ny maha-bevohoka sy ny vanim-potoana nanaovana azy. Ny fanalan-jaza amin'ny teny farany dia miavaka amin'ny hakamoana sy ny fihenjanana amin'ny vatany. Mba hisorohana ny fahasarotana haingana, ny vehivavy dia eo ambany fanaraha-maso ny dokotera manokana ao amin'ny hopitaly. Amin'ny ankapobeny, ny fanarenana amin'ny fanalan-jaza dia midika hoe:
Famaranana ny mety ho fanafody (fitsaboana antibiotika, fanafody manohitra ny fanafody).
Ny fandinihan-java-bita momba ny firazanana momba ny firazanana dia tsy ahafahana miala amin'ny foibeny.
Ny voka-dratsin'ny famaranana ny fitondrana vohoka amin'ny farany
Raha liana amin'ny dokotera ny mety ho fiantraikany, dia manandrana manontany ny vehivavy raha mety ny fanalan-jaza sy ny mampidi-doza ity dingana ity. Manamafy ny manam-pahaizana momba ny tovovavy fa tena tsy azo ilazana io fomba fanao io - ny fahasarotana sy ny fiantraikan'ny fanalan-jaza teo aloha dia mety hiseho rehefa afaka volana maromaro. Raha jerena ny fotoan'ny fampandrosoana, ny dokotera dia manasaraka ny mety ho fahasarotana amin'ny:
Voalohany - dia mitranga mandritra ny dingan-dava (fampidirana ny tranonjaza, ra).
Miala - mivoatra ao anatin'ny iray volana aorian'ny fandidiana (endometritis, hematoma, fivoaran'ny vohoka).
Lavitra - miseho aorian'ny taona iray sy aoriana (fiovan'ny otrikaretina ao amin'ny rambokely ao anaty, ny matoandrianana, ny fahasimbana amin'ny endometrioma, ny fanitsakitsahana ny fahamendrehan'ny valanaretina).
Doxycycline amin'ny ureaplasma
Gardasil - tsy fahampiana?
Gynetrel miaraka amin'ny myomas
Ureaplasma manokana - inona io?
Jereo ny fifehezana ny tandroka trompetra
Ny adenozan'ny molotra
PAP - ny mety ho vohoka - ny hevitry ny dokotera
Marine nail design
Ny trimestre voalohany amin'ny fitondrana vohoka dia ny fivoaran'ny foetal
Hiantsena any Pattaya
Diving any Thailand
Pampango amin'ny sofina
Ny The Royal Dramatic Theatre
Ny hotely lafo indrindra ao Dubai
T-shirt ny vehivavy Dolce Gabbana
Skin on elbows
Namerina "Oscar" tsy ara-dalàna ny Leonardo DiCaprio
Fiomanana amin'ny famerenana amin'ny laoniny
Banquet tao an-dalantsara miaraka amin'ny talantalana ho an'ny kiraro